FRP daylighting taratasy WW1025 - China Hubei Shengyu fitaovam-panorenana
FOB Price: 2.99-8.99 / Metatra / metatra toradroa
Ny FRP daylighting taratasy, antsoina koa hoe ny fiberglass nanamafy polyester daylighting taratasy, ahitana ny fiarovana avo-fampisehoana sarimihetsika, unsaturated polyester resin sy giberglass.Popular noho ny stablility sy mateza, dia ampiasaina amin'ny kianja be, entona, fialam-boly ho an'ny tampon-trano sy ny rindrina.
Model hateviny sakany Cover Width Length Weight Color
TT980 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 980mm 900-1200mm Araka ny Required 1.6-3.8KG / M White, Blue, Gray, Translucent
WW1025 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 1025mm 940-1200mm Araka ny Required 1.6-3.8KG / M White, Blue, Gray, Translucent
Shengyu FRP daylighting taratasy, ny anti-fahanterana efa ho tanteraka manify afaka filtrate fanampiny-Violet ka hanao ny fanompoana ny fiainana ny 20 taona.
High fiantraikany hery
Shengyu FRP daylighting taratasy, sy ny ambony fampisehoana ho an'ny manohitra ny fiantraikany sy ny ambany flexural modulus, dia mety hitondra ny fanafihana ny rivotra mahery na ny olon-kafa.
Shengyu FRP daylighting taratasy, fampiharana ny mari-pana ny fiaretana-38 to110 amin'ny haben'ny rafitsary miovaova.
FRP resin dia mahatohitra ny zavatra simika maro toy ny asidra, alkaline, sira, sns
Shengyu FRP daylighting taratasy, nanangana dehibe manify sy ny anti-fahanterana sosona, manome antoka ny fahamarinan-toerana sy ny loko mazava transmittance.
ny eny amin'ny tafo taratasy dia matevina sady mandimandina, izay manana vokany mitovy toy ny ravina lota. LT tsy mitelina vovoka sy mora azo diovina amin'ny alalan'ny orana.
Ny fifindran'ny Shengyu fahazavan'ny jiro FRP taratasy dia 60-85%. FRP jiro mazava ny taratasy manahaka ary malemy fanahy. LT tsy mamorona tarika fahazavana, mba hanao ny an-trano mamiratra kokoa.
Next: ASA UPVC mitafo fanitso tafo taratasy W1025
Ny FRP daylighting taratasy dia maharitra daylighting vokatra natao ho an'ny weathering resistance.install izany tsara noho ny tahotra ny fahavoazana na ny Scratch, izay mety hanan-kery ny fanompoana ao am-pofoany life.In mpiray ny daylighting taratasy miaraka amin'ny loko vy taratasy, teo aloha dia hatao ny farany.
Hametraka hanitsy Method Incrrect Install Method
1.The niteraka savaivony 2-3mm tsy maintsy ho mihoatra noho ny famerana visy savaivony noho ny tahotra ny fanitarana vokatry ny hafanana sy ny Contraction ateraky ny hatsiaka.
2.A Premium milina fanasan-damba tantera-drano dia tsy maintsy hatao eo amin'ny visy sy ny daylighting taratasy ho an'ny tantera-drano sy ny dustproof vokany.
3.A avo roa heny-manenjika adhesive kasety dia tsy maintsy hatao eo amin'ny purline noho ny fahatahorany ny friction mivantana eo amin'ny daylighting taratasy sy ny purline.
4.There tokony ho roa avo roa heny-manenjika adhesive horonam-peo ao am-pofoany ny mitsangana mpiray toerana ho tantera-drano vokany.
5.In ny fitehirizana ny daylighting taratasy, aza mametraka adin-tsaina eo aminy noho ny fahatahorana ny namakiana.
1.The sisa anjara amin'ny sary etsy ambony no soso-kevitra fisehon'ny, raha ny marina tapany no inadvisable iray.
2.The fomba tsara indrindra ny mpiray eo am-pofoany ny daylighting taratasy sy ny loko vy taratasy am-pofoana no feno mpiray manomboka amin'ny tandavan ho tafo na miainga avy amin'ny tandavan ny foibe purlines noho ireto antony ireto:
I Ny daylighting taratasy sy ny vy taratasy hafa dia eo ambany koronosy processes.As fantatsika rehetra, ny vy taratasy mandeha amin'ny alalan'ny dingana Rolling ny hatsiaka, niteraka somary vitsy intersecion fiolahana, raha ny taratasy daylighting mandeha amin'ny dingana thermosetting, izay niafara tamin'ny iray lehibe fihaonan-dalana zoro. (Raha toa ny fihaonan-dalana fiolahana loatra ny kely, ny sisa ny adin-tsaina dia avo dia avo, ka dia ho iharan'ny famoretana na namaky nampiasaina.) Noho izany, dia bebe kokoa tokony hatao ny hametraka ny daylighting taratasy noho ny vy taratasy .
II.For ny antony etsy ambony, ny taratasy daylighting mitady manana somary lehibe kokoa noho ny onja crest vy manao taratasy, izay manampy mifanaraka ny daylighting taratasy tao amin'ny taratasy vy better.On kosa, raha ny vy taratasy dia nataony mpifehy ny daylighting taratasy , dia tsy antonona tsara toy izany, na dia niafara tamin'ny famoretana crest ahevaheva eo amin'ny daylighting taratasy, izay hitarika ho amin'ny rano bebe kokoa leakage.A mitohy marindrano ny daylighting nahay taratasy dia tsy ho malalaka loatra, na ny mpanao fanorenana mety hanitsaka ny daylighting tarika any an-tsaha dingana fanorenana, izay mety hitarika ho famoretana ny daylighting taratasy (mahatonga ny rano leadage) na loza (olona mianjera nidina avy ambony)!
Common waveform taratasy am-pofoany mpiara: hametraka ny daylighting fanitso mivantana teo amin'ny manodidina profiled vy taratasy miaraka amin'ny butyl fingotra kasety nafatony ny tonon-taolana eo amin'ny lafiny roa amin'ny vy fanitso, ny faran'ny teny an-daylighting taratasy halavan'ny dia hatao eo amin'ny purline, takela-barahina nifanindritsindry ny vy mahery taratasy ny 250mm, roa farantsa 2 * 20mm butyl fingotra horonam-peo tao am-pofoany mpiray farany.
Frp mitafo fanitso Roofing Sheets
Frp Sheets Fa Roofing